Booliska Soomaaliya oo kala wareegay qalab Xafiiseed Booliska AMISOM | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Booliska Soomaaliya oo kala wareegay qalab Xafiiseed Booliska AMISOM
Booliska Soomaaliya oo kala wareegay qalab Xafiiseed Booliska AMISOM
Muqdisho (SONNA) Qalabkan oo ay ku deeqday Dowlada Denmark loona soo mariyay Ciidamada booliska AMISOM ayaa waxaa Booliska Soomaaliyeed ku wareejiyay Ms. Christine Alalo oo ah taliye ku xigeenka booliska AMISOM, iyada uu ka guddoomay Genaral Ahmed Hassan Maalin,Taliyaha Booliska ee Gobolka Banaadir.
“Waxaan leenahay shaqo na loo idmaday waxaana kamid ah inaan caawino Booliska Soomaaliyeed haday ahaan laheyd dhisida aqoontooda,Tababaro ku saabsan Daba gallada, Taageerista xiliyada Howlgalada, anagoo taas kaduuleyno waxaan samaynay.FPU (Formed Police Unit) kuwaas u shaqeeyo si joogto ah. Waxaan sidoo kale leenahay qorshooyin aan ku caawino oo ay kamid tahay Qalabka iyo dhamaan howlaha lagama maarmaanka u ah iney ku shaqeeyaan booliska Soomaaliyeed”. ayay tiri Ms.Allala markii ay ku wareejineysay qalabka Booliska.
Qalabkan oo ka koobnaa Komputaro, nalalka cadceeda ku shqeeyo, Printiro iyo qalab kale ayaa loo qaybin doonaa saldhigyada booliska Gobolka Banaadir.
General Maalin ayaa ka mahad celiyay Deeqda lagu wareejiyay Booliska Soomaaliyeed, asagoo sheegay in qalabkan uu ka caawin doono xoojinta Sharciga iyo ku dhaqankiisa, isla markaana loo qeybin doono 4 xarumood oo kamid ah saldhigyada gobolka Banaadir.
AMISOM ayaa ka caawisa booliska Soomaaliyeed Tababarada iyo Agabyada Xafiisyada, iyadoo ay ka dhaxeyso wada shaqeyn aad u wanaagsan.
Previous articleShirka Iskaashiga Bulshada Africa iyo Shiinaha oo la soo gaba gabeeyay
Next articleWasiirka Amniga XFS”Waxaa la dhisayaa 32 kun oo Booliska isku dhaf ah oo Amisom kala wareega Amniga